Raawwii laabsii yeroo ariiffachiisaa milkeessuuf hirmaannaan ummataa murteessadha -mootummaa
Monday, 07 November 2016 08:33
Finfinnee, Onkololeessa 26,2009(oromiapo) - Yeroo ammaa biyyis ta`e naannoon Oromiyaa guutumaan guutuutti nagaayaa fi tasgabbii argateera jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa.
Wanti hunduu nagaa ta`usaatin ummanni nagayaan ba’ee naga’aan galaa akka jiru kan eere ibsi Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, nageenyi wayita boora`ee turetti oomishaa fi yeroosaa qisaasa`e bakka buusuuf halkanii fi guyyaa hojjachaa jiras jedheera.
Gama biraatiin Ummanni humnootaa nageenyaa waliin ta`uun, nagaa naannoosaa kabachiisuu irratti hirmaannaa cimaa taasisuun namoota jeequmsa irratti hirmaatan saaxiluun gara haaromsaatti ergaa jiraachuus kaasa ibsi biirichaa.
Ummanni waan hunda dura nageenya amansiisaa argatee diina isaa bara dheeraa hiyyuummaa irratti duuluun misooma amnsiisaa fi hunda galeessa dimokraasii bu`uura ummatummaa qabu mirkaneeffachuun jiruu fi jireenya isaa fooyyeffatee jirachu akka ta’es yaadachiisera Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibsa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetif ergeen.
Fedhiin ummataas kan dhugoomu imala haroomsa biyyaatin waan ta’eef, ummanni milkaa’ina misooma nageenyaa fi dimokraasiif mootummaa cinaa hiriiruun tumsuu akka qabu dhaamera.
More in this category: « Seerri hirmaannaa damee dhuunfaa oomisha anniisaa huurkaarratti cimsu hojiirra oolufi Deeggarsi ijaarsa hidha Haaromsaa cimee itti fufeera »
Torbe Kana 1686
Ji'a Kana 1686
01/05/07 irraa eggalee 3422857
Kan Amma Daawwachaa Jiran 26